बेलुका ढिलो खाना खानुहुन्छ ? हो भने हेर्नुहाेस यस्ता घातक राेग निम्ताउदै हुनुहुन्छ
वि.सं ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १४:११
काठमाडौ : एउटा उखानै छ, ‘बिहानको खाना राजा समान, दिउँसोको रोगी र रातीको जोगी समान’ । तर जोगी समान भनेर तपाई बेलुका ढिलो खाना खाँदै त हुनुहुन्न ?
तपाईका यी बानी ब्यवहार जसले स्मरण शक्तिमा कमी ल्याउँछ।
बेलुका ढिलो खाना
राजपा अध्यक्षीय प्रणालीमा अगाडि बढ्ने
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानलाई लिएर विवाद, निर्वाचन आयोगमा उजुरी